एउटा मुसा समाउनेलाई डेढ सय रुपैयाँ पुरस्कार !::Radio Chhahari
एउटा मुसा समाउनेलाई डेढ सय रुपैयाँ पुरस्कार !
मुसाका कारण दिक्क बनेको इण्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा मुसाको समस्या निवारणका लागि सरकारले अनौठो उपाय अपनाएको छ । जसअनुसार सरकारले मुसा समाउने मानिसलाई पुरस्कार दिनेछ ।
सरकारका अनुसार एउटा मुसा समाएबापत २ हजार रुपियाा प्रदान गरिनेछ । उक्त रकम भनेको नेपाली रुपैयाँमा डेढ सय भन्दा बढी हो ।